Ihe ị ga-eme na Dresden | Akụkọ Njem
Dresden bụ obodo German, isi obodo steeti Saxony. Ọ bụ obodo mgbe ochie, nke ukwuu omenalaỌ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụ ndụ nka nke metụtara egwuregwu, ukwe na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Ọ bụ ya n'ezie? Ya mere, ahapụla ya na njem ị gafere Alemania.
Taa, anyị ga-elekwasị anya na obodo ochie a nke amaliteghachiri site na ntụ nke bọmbụ nke Agha nke Abụọ dị ka Phoenix
2 Dresden njem
Obodo a nwere ihu ọma na Agha izizi, mana obere oge tupu ngwụcha nke abụọ bọmbụ ndị ahụ jikọrọ ọnụ ghọrọ ebe akụkọ ihe mere eme ya na mbibi ma gbuo ihe karịrị puku mmadụ iri abụọ na ise. Mwakpo a abụghị nke esemokwu, mana eziokwu bụ na ụbọchị ahụ na February 25 obodo ahụ gbara ọkụ.
Mgbe agha obodo ahụ gasịrị fọdụrụ n'aka Soviet Union, ma ọ bụ n'okpuru ọchịchị a ka e wughachiri ebe akụkọ ihe mere eme ma akụkụ ndị ọzọ nke obodo ahụ gbasaa na-agbaso ụkpụrụ nke usoro ọchịchị Kọmunist. Mgbe oke ide mmiri nke afọ 2002 gasịrị, ekwuputara ndagwurugwu Elbe dị na Dresden ka ọ bụrụ ebe ọdịnala ọdịnala ụwa, ngalaba nke furu efu na 2009 mgbe arụchara akwa mmiri ọgbara ọhụụ.
Dresden dị n'akụkụ Osimiri Elbe, na ndagwurugwu nke osimiri ahụ, gbasapụ ya n’akụkụ abụọ. Ọ bụ obodo nke anọ kachasị na Germany ma taa Ọ bụ otu n'ime obodo ndị nwere nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Europe niile.
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ obodo mara mmaO nwere otutu ihe nkiri, ihe mgbe ochie na ihe egwu. Ya mere, gịnị ka anyị ga-eleta na Dresden? Mbụ ụka, Frauenkirche, nke nwere otu nnukwu ụlọ dị na kọntinent ahụ. Emechara ụlọ ụka izizi ahụ na 1743 mana ire ọkụ na 1945. Ọ dị ka nke a, mkpọmkpọ ebe, dị ka ihe ncheta nke agha ahụ, ruo mgbe akwadoro nwughari ya na 80s.
Nweghachi a malitere na 1994 n'iji ọtụtụ nkume mbụ. Ọrụ ndị ahụ gwụchara na 2005 na obe na orb ka emere na London dị ka ngosipụta nke idozi maka mbibi agha. Nke abuo, i ghaghi ima Lọ Zwinger, ọmarịcha ụlọ Baroque nke Saxon Elector nyere iwu ka iwu ya August II the Strong na njedebe nke narị afọ nke XNUMX.
Amuru ya dika orangi ma ọ ghọrọ nnukwu ebe obibi na ogige, ogige, na ihe a kpụrụ akpụ ndị mara mma. O nwere ihe mara mma Isi iyi nke Nymph, na niches, balustrade na ihe oyiyi. Taa ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ụlọ nwere ihe nnweta ọha na eze na nke kachasị mma Gemäldegalerie Alte Mesiter dịka o nwere ọmarịcha nchịkọta ọrụ Italian, Dutch, Spanish na Flemish Renaissance.
Nchịkọta a ka Augustus nke Mbụ bidoro na narị afọ nke 1746 mana ọ malitere na 750 n'aka Augustus nke Atọ mgbe ọ zụtara nnukwu akụkụ nke nchịkọta Duke nke Modena. Enwere ọrụ nke Rembrant, van Eyck, Titian, El Greco, Zurbarán na Rubens, n'etiti ọrụ XNUMX gosipụtara n'otu oge, naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke nnukwu nnakọta.
Reslọ Dresden Opera, Semperoper, Ọ mepere na 1878 ma bụrụkwa ụlọ nke abụọ n'otu ebe ahụ ebe nke mbụ gbara ọkụ na 1869. Ọ dị na neo-baroque na Italian Renaissance style, ọ mebiri na Agha nke Abụọ wee meghee ya na 80s. Enwere arụmọrụ kamakwa njegharị mara ọmarịcha ime ya.
Palacelọ Renaissance nke ahụ bụ nke ebe ndi nhoputa ndi ochichi na ndi eze nke Saxony site na narị afọ nke XNUMX ruo nke XNUMX bụ Residenzschloss. Taa, ọ nwere ọtụtụ ụlọ ebe a na - edobe ihe eji eme ihe, ebe a na-edebe akụ, ihe agha na akụkọ ihe mere eme na ụlọ nzukọ Turkish nwere nka nka.
O nwekwara ụlọ Kupferstich - Kabinett, nke nwere ihe osise 500, mbipụta na eserese nke ndị nka dịka Goya, Michelangelo, Jan van Eyck, Rubens na Rembrandt, na Münzkabinett, nchịkọta ego.
La Ogige Green ọ bụ usoro nke ụlọ ndị eze gbanwere n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. Ha biri ala nke mbụ na nke abụọ nke nku ọdịda anyanwụ nke obí eze ahụ. Aha, ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ka enyere ala mbu, site na narị afọ nke 3, yana ihe ruru puku ọrụ nka atọ nke ọdụ, ọla edo, ọla ọcha na amba. N'elu ala nke abụọ bụ New Green Vault, ụlọ ngosi ihe nka dị iche iche nwere ọrụ nke Dinglinger na-egbuke egbuke mere maka August II nke Ike.
Na nku ọwụwa anyanwụ nke obí eze, enwere 102 mita ogologo poselin mural. A malitere ese ya na 1870 ma emesịa ọ bụ taịl poselin nọchiri ya, n'ihe dịka 1900. A maara ya dịka Fürstenzurg ma gosipụta ndị isi iri atọ na ise nke oflọ Wettin, site na margraves nke narị afọ nke iri na abụọ, site na ndị isi na ndị na-ahọpụta ndị eze ruo ndị eze nke narị afọ nke iri na itoolu.
Ikwu okwu poselin na Dresden nwekwara Mkpokọta Dresden Posel, n'ọnụ ụlọ ndịda nke Zwinger Obí. E guzobere nchịkọta obodo site na August II na 1715 ma nwee akụ ndị China na Japanese site na narị afọ 20. Nchịkọta ahụ nwere ihe dị ka puku iri abụọ mana enwere naanị 10% na ngosi.
N'ihi na oké echiche nke akụkụ nke obodo ahụ bụ Brühl teres, n'ebe ugwu nke ụka. bụ mbara ala panoramic nke mita 50 nke na-ele anya na mmiri Elbe site n'akụkụ aka nri n'etiti etiti mmiri nke Augusto na Carola. Ejikọtara terrace na katidral ahụ site na steepụ emume yana ụbọchị site n'oge ochie e wusiri ike nke obodo, mgbidi. N'ime ihe ndị a niile, ọ bụ nanị ubi ole na ole fọdụrụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ.
Albertin Ọ bụ aha a na-akpọ ebe ebe nchịkọta ihe osise nke eze dị ma ọ dị ebe a. Taa ọ na-enwekwa gallery ọhụrụ na nka enwetara na narị afọ nke XNUMX na ọtụtụ ọrụ nke Mmetụta.
La Katidral Dresden Ọ bụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Brühl Terrace, nwere ụdị Baroque Italiantali, ma wughachi ya mgbe agha ahụ gachara. Enwere ndị ezinaụlọ Wettin iri anọ na itoolu n'ebe a na crypt, gụnyere Augustus nke Mbụ na III na ndị eze narị afọ nke 49 niile nke Saxony. Ọ na - edobe akụkụ ikpeazụ nke fọdụrụ na maestro Silbermann.
N'elu aka nri nke Elbe, obodo ọhụrụ bụ aha nke Dresden district e wughachiri mgbe ọkụ nke 1730. N'ihi ya aha, «ọhụrụ», neu, n'ime akụkụ e dere ochie mgbidi, ná mpụta nwere ihe karịrị 150 Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na dị ukwuu na-aga nke abalị ma nwee ezigbo oge.
Ọ bụrụ na-amasị gị obí eze, ị nwere ike ịme a ụbọchị njem ole na ole kilomita mara na oge obibi obibi nke ndi nhoputa na ndi eze nke Saxony. E nwere obí eze atọ, waserpalais, el Bergpalais na Na -achọ Palais. Taa, ha bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nke arịa, arịa na akwa ebe ọ nwere acres nke ubi ndị mara mma iji na-agagharị.
N'ikpeazụ, obodo German a nwere kaadị ego ndị njem nleta nwere ike ịba uru: Kaadị Dresden City nke bara uru maka ịgagharị na ụgbọ oloko ndị mepere emepe, trams na bọs na ụgbọ mmiri n'ime obodo. Ọ dị otu ụbọchị, ụbọchị abụọ na atọ, otu na ezinụlọ yana ihe akpọrọ Regio.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Ihe ị ga-eme na Dresden